अर्थतन्त्रमा विश्वास र मनोविज्ञानको भूमिका महत्वपूर्ण - Khabar Break | Khabar Break
परराष्ट्र सचिव वैरागी मुख्य सचिव नियुक्त, पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस
युवा संघ मकवानपुरका संयोजक चौलागाईलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
यात्रुको सङ्ख्या बढेपछि भरतपुरमा दैनिक पाँच उडान
संक्रमण बढेपछि स्पेनले दियो राजधानी मड्रिडमा लकडाउनको आदेश
यस्तो छ आज सुनचाँदीको मुल्य
अनुगमनको क्रममा रु १२ लाख बढी असुली
अर्थतन्त्रमा विश्वास र मनोविज्ञानको भूमिका महत्वपूर्ण
सेयर बजारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याजदरले पारेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बिदेशी पुँजी ल्याएर तरलता समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । अहिले शोधानान्तर साढे ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
देशबाट बाहिरिने रकम बढेपछि जहिलेपनि यहाँ बैंकमा पैसाको हाहाकार हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने अर्थमन्त्री घोषणा छ । जसले बैंकमा पैसा आउँछ ब्याजदरलाई घटाउने छ । यसको फाइदा सेयर बजारलाई नै हुने हो । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलामहत्व विश्वास र मान्छेको मनोविज्ञानले राख्छ । बजार व्याजदर र बैंकको तरलता समस्या समाधानमा तत्काल जानुपर्छ । याे समस्याको मुख्य कारण घरजग्गा र शेयरबजारमा भएको लगानीकाेबाट सोचो बनाहेको जती प्रतिफल प्राप्त नभहेकोले र पुनर्चक्रम कमजाेर भएकोले परेको हुनसक्ने एक दरिलो कारण हो ।
याे समस्यालार्इ व्याजदरमा प्रभावले राहत पुग्नसक्छ । Current economic situation. अार्थिक वृद्धि अझै बढी हुनुपर्ने त हाे तर लगानी र उत्पादनमुखी खर्चको अनुपातको तुलना र उत्पादकत्व हिसाब गर्ने हाे भने हुनसक्ने यति नै हाे । विदेशी विनिमय सञ्चिति १० देखि १२ महिनासम्मलार्इ अायात धान्न पुग्ने छ । यो मजबुत अवस्था हो । द्रास्फीति ५% भन्दा तल छ जुन सामान्य अवस्था हाे । मूल्यबृद्धिदर भन्दा व्याजदर बढी भएकोले cost of fund बढी भएकोले नाफा कम छ । यसकारण बरू लगानी अाकर्षण घटाउनसक्ने संभावना रहन सक्छ ।
यो वर्ष दर र दायरा दुवै नबढाइएकाे (buoyancy near to zero change only elasticity change) भए पनि राजश्व लक्ष्यअनुसार नै उठिरहेको छ । शोधनान्तर घाटा पनि ६/७ अर्ब हाराहारी हो, याे लामो समयसम्म रहेको र रहने देखिँदैन । नेपाली मुद्रा बलियो छ, मुद्राको मूल्य अत्यन्तै घटबढ छैन । अधिमूल्यन र अवमूल्यनकाे अवस्था सामान्य छ । उद्योगको उत्पादकत्व लाेडसेडिङ हुनुभन्दा अघिभन्दा निकै सुधाराेन्मूख छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ । देशमा प्रचलित ज्यालादरमा याे काम उ काम नभनी काम गर्ने हाे भने बजारमा काम जति नि छ ।
कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रषणको योगदान २७% हाराहारी छ जुन त्यस्ताे ठूलो गिरावट भएकाे अवस्था हाेइन । कूल राष्ट्रिय बचत ४०% भन्दा बढी नै छ । यसकाे परिचालन प्रभावकारी छैन अर्कै कुरो हाे । कूल सरकारी ऋण अमेरिका (२००%), जापानजस्ता देशको जिडिपीको शतप्रतिशतभन्दा बढी छ । तर हाम्राे निकै नै न्यून या सीमाबाहिर छैन । Gross fixed capital formation GDP काे ३३% भन्दा बढी छ । Investment trend बढ्दो नै छ । (GDP को यसअघिका वर्षहरूमा ३९, ३३ र अहिले ४२%) सार्वजनिक लगानी थाेरै छ तर घटदो दरमा छैन । (जिडिपीको अघिल्ला वर्षहरूमा ४, ५, ७.१४ अहिले ७.२८% छ) निजी लगानी पनि बढ्दो दरमा छ ।
(GDP को १८, २२, २१ र पछिल्लो २६% छ).उपभोग बढी छ यसले समष्टि माग नि बढाउने र लगानी बढ्ने भएकोले याे अत्यधिक समस्याको विषय नै होइन । तत्कालका समस्या र सोझिनुपर्ने समाधानका दृष्टिः बजार व्याजदर र बैंकको तरलता समस्या समाधानमा तत्काल जानुपर्छ । याे समस्याको मुख्य कारण घरजग्गा र शेयरबजारमा भएको लगानीकाे प्रतिफल प्राप्त नहुने र पुनर्चक्रम कमजाेर भएकोले परेको हुनसक्ने एक दरिलो कारण हो । याे समस्यालार्इ व्याजदरमा प्रभावले राहत पुग्नसक्छ ।
व्यापार घाटा जुन रेमिट्यान्सले पूर्ति गरिरहेको छ, यसलार्इ जलविद्युतको उत्पादन बढाएर पेट्रोलियमको अायात प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र पनि यो ठूलो समस्याको विषय नै रहँदैन । याे वर्ष राजश्वका दरहरू चलाइएको छैन । यसका दायरा फराकिलो गर्नसक्ने प्रशस्तै अाधार र संभावना छन् । नेपालमा कर तिर्नेको संख्या एकदमै कम (अधिकांश पेशाका व्यक्तिले तिर्दैनन सबै गरेर १६ लाख भनिएको छ) र कर छली अत्यन्तै बढी हुन्छ भन्ने सबैलार्इ थाहा छ । अायातमुखी राजश्व (कूल राजश्वको करिव ५५%) लार्इ बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै करको दायरा बढाउनु जरूरी छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च अाधाले घटाउन सक्छ ।
(जागिरका नाममा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती छन्, कर्मचारीकाे संख्या र उत्पादकत्वको कुनै तालमेल छैन, प्रविधिको प्रयोग छँदैछैन) कार्यालय संचालन खर्च (विद्युत, पानी, स्टेशनरी, इन्धन, घरघरै पत्रपत्रिका, टेबुफ कुर्सीलगायत अफिस सरसामानलगायत) खर्च बेप्रवाह छ किफायति भएर उत्पादन र लाभ बढाउन पराे । जहाँसम्म देशको ढुकुटीमा पैसा छैन भन्ने विषय छ, याे हाम्राे मासिक कमाइजस्तै हाे । अाम्दानी हुन्छ खर्च नि भइरहन्छ । यसको चक्र चलिरहन्छ । ढुकुटीमा पैसा थुप्रिनु राम्राे हाेइन । त्यसैले त deficit बजेट बनाएर थप लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको हाे ।
Deficit बजेट भनेकै सरकारी कोषको भरपुर उपयोग हुँदा ढुकुटीमा पैसा रहने अवस्था हाेइन । मुख्य चुनाैती भनेकाे पूँजीगत खर्च बढाउनु, उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउनु, अनि पूँजी निर्माण गर्नु हो । त्यसको लागि पैसा होइन अहिले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता र काम गर्ने जाँगर बढाउनु जरूरी छ । समय सबैभन्दा ठूलाे पूँजी हाे, सदुपयाेग जरूरी छ । मान्छेको मर्मत संभार (मानवपूँजी विकास) जरूरी छ । औद्योगिक योगदान बढाउनु अनि कृषिको औद्योगिक रुपान्तरण जरुरी छ । पैसा नभएरमात्र अर्थतन्त्र पछाडि परेको हाेइन, खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर या खर्च नभएर देश पछि परेको हाे । विकास गर्ने क्षमता भएको भए सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउने गरेको पूँजीगत खर्च किन अत्यन्तै कम भएको ?
पौडेल फाइनन्सियल डेभलपमेन्ट एण्ड इकोनमिक ग्रोथ इन नेपाल विषयमा पिएचडी स्कलर हुन
कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? यस्ता छन बलात्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारण
वर्तमान समय सामाजिक संजाल वरदान साबित
जनता, देश र राजनीति
यि हुन् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका भन्ने आधारहरु
अनन्तकालको लागि आवश्यक छ बालबालिकामा लगानि
यसरी जिते हेटौंडाका ढुङगेलले कोरोना
बिश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : कोरोनाको संकटले बढ्यो आत्महत्याको जोखिम
रिपोर्टर डायरी: हेटौंडाको गौरीटार आइसोलेसनको ९ दिन
हेटौंडामा कोरोना जित्नेको अनुभव,लक्षण देखिएका भन्दा नदेखिएकाबाट जोगिनु पर्ने
राजकुमार नहर्कीलाई एसके निधनको खुल्ला पत्र
अनलाइन कक्षाका नाममा शूल्क नउठाउन नेविसंघ चेतावनी
विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० लाख १८ हजार नाघ्यो
म्यानचेस्टर सिटी काराबाओ कपको क्वार्टरफाइनलमा प्रबेश